Isibhedlela Amakhethini alahlwayo, Amakhethini Alahlwayo - Tianfeng
ISuzhou Tianfeng Izinto Zemvelo, ezisungulwe ngo-2008, ibhizinisi elibanzi
amakhethini asesibhedlela asezingeni eliphezulu alahlwayo anekhono locwaningo nentuthuko, ukwakhiwa nokukhiqizwa.
Imikhiqizo yethu ifaka amakhethini ajwayelekile alahlwayo, amakhethini anezikhala namakhethini aprintiwe.
ikhethini lenziwe nge-100% polypropylene enomunye wemithelela ephansi kakhulu yezemvelo yanoma iyiphi into - yokwenziwa noma yokuguqulwa.
Amakhethini ezingane alahlwayo
Amakhethini ethu alahlwayo athuthukisa indlela izibhedlela eziphatha ngayo izinqubo zazo zokuhlanza nokubukeka kwazo.
Alahlwayo anezikhala amakhethini
Alahlwayo kwesihenqo izingwegwe
I-Suzhou Tianfeng Environmental Materials Technology, esungulwe ngo-2008, ibhizinisi elibanzi eligxile emakhethini asezingeni eliphakeme asesibhedlela alahlwa ngekhono locwaningo nentuthuko, ukuklama nokukhiqiza.Imikhiqizo yethu ifaka amakhethini ajwayelekile alahlwayo, amakhethini anezikhala namakhethini aprintiwe. Zonke ezinezingwegwe nelebuli yokushisa enamathiselwe.
Amakhethini ethu alahlwayo esizukulwane esisha aklanyelwe ukufaka amakhethini akhona asebenzisekayo nawashekayo ngezindleko ezinkulu zokonga kanye nokulawulwa kokutheleleka okuthuthukile.
Singungcweti ohamba phambili wokulawula ukutheleleka, ukwenziwa kwamakhethini alahlwayo asebenza ngama-anti-bacterial kanye ne-flame-retardant.
Isipiliyoni seminyaka engu-13 + sikhiqiza amakhethini ama-cubicle alahlwayo
Kufakazelwe ukuhlangabezana nezindinganiso zomhlaba jikelele ze-anti-bacterial ne-flame retardant
Izindleko ezibalulekile zokonga nokulawulwa kokutheleleka okuthuthukisiwe
Umugqa wokukhiqiza ozimele olwa namagciwane
Yenziwe ngendwangu engu-100% ye-polypropylene engeyona ephothiwe
Abasebenzi Bezokunakekelwa Kwezempilo Bakhishwe yi-COVID Ukulwela Izinzuzo Zokunxeshezelwa
Kuze kube manje, abasebenzi bekufanele bakhombise ngokukholisayo ukuthi batheleleka lapho besemsebenzini. Kepha izifundazwe eziyi-16 manje sezicabanga ukubeka umthwalo esibhedlela: Kwenze kube ubufakazi bokuthi isisebenzi asitholanga lesi sifo emsebenzini. Enye yezinto eziningi ezenza isifo se-coronavirus 2019 (COVID-19) ...
I-EPA Greenlights Lysol Disinfectant Spray yokulwa ne-COVID-19
I-Environmental Protection Agency (i-EPA) igunyaze i-Lysol Disinfectant Spray ukulwa ne-SARS-CoV-2, igciwane elibanga isifo se-coronavirus 2019 (COVID-19). I-Environmental Protection Agency (i-EPA) ivume iLysol Disinfectant Spray ukulwa ne-SARS-CoV-2, igciwane elibanga i-coronavirus ...
Kunesidingo esikhulu sokufaka ama-SNF ngezinsizakusebenza eziningi, hhayi kuphela ngemishini yokuzivikela yomuntu siqu, kodwa nangezinsizakusebenza ezibucayi zokuvimbela ukutheleleka kanye nabasebenzi. Kusukela kwaqala ubhadane lwe-SARS-CoV-2 / COVID-19 e-United States, sikwazile kabanzi ukuthi sengozini ...